चीनमा योग खोज्दा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
असार ७, २०७६ लक्ष्मी लम्साल
सन् २०१२ को मार्चमा बेइजिङ उत्रिनेबित्तिकै योग शिविरको खोजीमा भौतारिन थालें  । मेरा लागि योग एउटा नशाजस्तै बनिसकेको थियो  ।
काठमाडौं सिंहदरबारको पूर्वपट्टि अनामनगरको बासिन्दा छँदा करिब ३–४ वर्षदेखि योग शिविर धाउने आदत बसिसकेको थियो । बेइजिङमा पनि उही योगको तलतल लाग्न थालेपछि मैले सहकर्मीलाई गुहार्न थालें ।
सचिङ्सान जिल्लाको पापाओसान भन्ने ठाउँमा हौसा नाम गरेको एउटा फिटनेस सेन्टरमा मैले पहिलो पटक चिनियाँ योग अनुभव गर्न पाएँ । यम, नियम, आसन, प्रणायाम, लामो लामो श्वासप्रश्वास, आँखा चिम्लने, अन्तर्मनमा हराउने, ओम् उच्चारण गर्ने इत्यादि योगका तत्त्वहरूको प्रतीक्षा गर्दागर्दै शिविर सकियो । उति उत्साहित हुन सकिनँ र मनमनै सोचें, ‘कुनै दिन मैले यिनीहरूलाई वास्तविक आध्यात्मिक योग सिकाइदिनेछु ।’
युवावस्थामा मेरो अन्तर्मनको तिर्खा नै योग, ध्यान, ब्रह्मचर्य थियो । यी कुराहरू तेर्स्याउँदै मैले वैवाहिक जीवनबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको हुन्थें । पारिवारिक रूपमा विवाहका लागि दबाब दिनेहरूको मुखमा बुजो लगाउन यही एउटा बाटो बाँकी थियो । परदेश हुँदा पनि योगसम्बन्धी सामग्रीहरू, संस्कृत मन्त्रहरू इन्टरनेटबाट सर्च गरी गरी घोक्नु, जीवनसूत्र, प्रवचनकला इत्यादि सिक्दै जाने बानी परेको थियो । घरपरिवारले चाहिँ एक न एक दिन मैले पाणीग्रहण गर्ने सोचिरहेको थियो । मैले परिहासका लागि ब्रह्मचर्यको कुरा उठाएको थिइनँ । मैले आश्रम किनेको प्रमाण पनि पेस गर्थें । ‘जतिसुकै जोगी बने पनि यो स्वार्थी दुनियाँमा आफ्ना लागि हेरिदिने मान्छे कोही न कोही अवश्य चाहिन्छ । त्यो आफ्नै जीवनसाथीबाहेक अरू कोही हुन सक्दैन,’ सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघमा कार्यरत मेरा पूर्वसहकर्मी दीपक आचार्यको भनाइले कता–कता छोयो । आखिर विवाह गरे पनि ब्रह्मचर्य त अपनाउन सकिने भन्ने सुनें । योगले मात्रै ब्रह्मचारी होइन्न कि भन्ने अर्धज्ञानले मेरो मथिंगल झन् झन् रन्थनिन थाल्यो ।
म योगध्यान प्रवचनमार्फत प्रवचक र प्रव्रजक हुने ध्याउन्नमा थिएँ । योगलाई मानव धर्मको रूपमा लिइने भएकाले भारत, नेपालमा यस्ता शिविरहरू निःशुल्क हुन्थे । बेइजिङमा त शुल्क तिर्नुपर्ने र भनेजस्तो योगको स्वाद नपाएपछि मैले दोहोर्‍याएर उही योगकेन्द्र जाने बाटो बन्द भयो ।
कालान्तरमा एक जना चिनियाँ महिलासँग परिचय भयो । उनी बेइजिङमा घर भएकी, छोरो जापानमा अध्ययनरत र श्रीमान् डिभोर्स दिएर अर्कै प्रान्त बसेका रहेछन् । ती अन्टीले मलाई छोरा भन्न थालेपछि आत्मीयता बढाउन गाह्रो भएन । मात्रै भाषाको जटिलता रह्यो । मैले कनीकुथी केही चिनियाँ शब्द सिक्न थालें । जीवनप्रतिको सादगीका कारण ती अन्टीले मप्रति धेरै हेरचाहको भावना राख्दै ध्यानस्थलको खोजी गरिदिइन् । उनले पनि कसैका मुखबाट सुनेको एउटा नामी युआन नामक गुरुकोमा लगिन् । गुरुसँग परामर्श गर्नका लागि गएका थियौं । आफ्नो कुर्सीको अघिल्तिर बसालेर झन्डै आधा घण्टाको पट्यारलाग्दो एकोहोरो भाषण दिएपछि मैले अन्टीलाई भनें, ‘अब फर्किने होइन ?’
मैले बल्लतल्ल बोलेको यति मान्डारिनले उनलाई ठूलो राहत मिल्यो । जुरुक्क उठिन् र गुरुसँग बिदा मागिन् । ती गुरु लिफ्टसम्म पुर्‍याउन आए । तल पुगेपछि अन्टीले हल्का महसुस गर्दै भनिन्, ‘गुरु त गुरु, कति पतरपतर बोल्न सकेको ? धन्न तिमीले जाने हतारो देखाएर ठीक गर्‍यौं ।’
कुनै महापुरुषको संगतका लागि भौतारिरहेका हाम्रा लागि यस्ता गफाडी गुरु साक्षात्कार भए । त्यहाँबाट उछिट्टिएर हामी कताकता एउटा ध्यान केन्द्रमा पुग्यौं । बल्ल चिनियाँ योगध्यानको भोक मेटिने गन्तव्यमा पुगेजस्तै भयो ।
साँघुरो हलजस्तो एउटा कोठाका वरिपरि चकटी र अघिल्तिर होचा होचा टेबुलमा हरियो चियाका कपहरू थिए । लहरै बसेका मानिसहरू शान्त भावमा थिए । हल्ला वा चर्को आवाज नगरीकन, शिष्टताका साथ बसिरहेका थिए । उसैगरी बस्दै हामीले पनि ध्यानको भाव मनमा राख्यौं । गुरुजीले के के हो के के भनिरहे । फेरि आँखा चिम्लिने, फेरि अनुभव सुनाउने, फेरि आँखा चिम्लिने गर्दागर्दै कक्षा सकियो । ढिलो पुगेकाले हाम्रा लागि खासै पर्याप्त भएन यो ध्यान ।
सीसीटीभीमा काम गर्ने एक जना पत्रकारसँगै अर्को एक युवा पनि अन्टीको गाडी चढेर हामी गएतर्फ जाने भए । दुई जना ध्यानार्थीसँग मित्रता भयो । टाढा भएकाले उनीहरू पनि प्रायः जान नसक्ने रहेछन् । अन्टी मेरो क्षेत्रदेखि केही टाढा बस्ने र प्रायः बुद्धिज्मसम्बन्धी सामाजिक कार्यका लागि प्रान्त प्रान्त दौडिरहने भएकाले भेटघाट पातलो हुन्थ्यो । मेरो अफिसको समय त्यति खुकुलो हुन्नथ्यो । एक दिन पत्रकार वाङ साइकल चढेर मेरो अपार्टमेन्टमा आइपुगिन् । योग ध्यानका कुरा गरिन् । तिनी पनि अर्को ठाउँमा कोठा सर्ने भएकाले यो मित्रता झन् टाढिने भयो । अर्को ध्यानार्थी चाहिं वीच्याटमा कहिलेकाहीं गफिन्थे तर प्रायशः उस्तै प्रश्न गर्थे, ‘नि सिह्वान नान रन् मा ?’ अर्थात् के तिमी केटा मान्छे मन पराउँछौ ?
चीनमा क्यू क्यू सामाजिक सञ्जालपछि टेन्सेन्टले वीच्याटको विकास गरेको थियो । यस्सो हल्लाउँदा पनि वरिपरि केही किलोमिटरका मान्छेहरूसँग वीच्याट जोड्न सकिन्थ्यो । यसैगरी एक जना योगप्रेमी जोडिइन् जो मेरो अपार्टमेन्टको नजिकै आइन् । भारतीय योगबारे जिज्ञासा राखिन् । भारतीय योगअनुसार हरेक पुरुषले स्त्रीप्रति आमा वा दिदीबहिनीको भावना राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हरेक योगी त परिवारकै सदस्य नै हुने मैले बताएँ । उनले सँगै योग गरेर भारतीय योगशैलीबारे जानकारी लिने इच्छा राखिन् । तर त्यो दिन कहिले भनेर यकिन थिएन । केही समयपछि उनले बेइजिङ छोडेर अर्को प्रान्त गएको र योग केन्द्र खोलेर कक्षा चलाइरहेको फोटोहरू वीच्याटमा देखियो ।
उनले भनिन्, ‘त्यति नजिक भएर पनि सँगै योग गर्न नपाएकोमा दुःख लाग्यो । तर म परम्परागत परिवारकी केटी हुँ । कुनै केटाले कोठामा बोलाउँदा कसरी आउन सक्थें र ?’ एवं रीतले मेरा योगसम्बन्धी सञ्जालहरू धमाधम तोडिँदै गए । चाइना रेडियो इन्टरनेसनल (सीआरआई) ले व्यवस्थापन गरेको एउटा योग कक्षा साप्ताहिक रूपमा २ दिन चल्थ्यो । गुरुआमाहरू कडा शारीरिक श्रम गराउँथे । बेलाबेलामा संस्कृत मन्त्रसहित कक्षा थाल्ने र नमस्ते भनेर कक्षा समापन गर्ने कलाले मलाई आकर्षित गर्थ्यो ।
गुरुआमासँगै वीच्याट संवाद बढाउनुको आशयचाहिँ तिनले ध्यान, प्राणायाममा चासो दिन्थिन् कि भनेर हो । उनले शरीरै भाँचिने गरी गराएको व्यायामले मेरो आध्यात्मिक योगको प्यास मेटिरहेको थिएन । मैले नेपालबाट झिकाएका योगसम्बन्धी किताबहरू देखाएँ । उनले चित्र हेर्नेबाहेक अक्षर चिन्न सक्दिन थिइन्, मैले अनुवाद गर्न सक्दिन थिएँ । एक दिन उनी मेरो निम्तो स्विकार्दै कोठासम्म आइन् । समयभावका कारण सह‘योग’ चाहिं हुन सकेन । तर अर्को दिन पनि फर्किएर आइनन् । मसँग एकचोटि कक्षा लिएको भए उनलाई ध्यानप्राणायामको बारेमा जानकारी हुन्थ्यो र योग कक्षा अर्थपूर्ण हुन्थ्यो । दुई जना गुरुआमा आलोपालो गरेर कक्षा लिन आउँथे । बिस्तारै मैले साथी बनाइसकेकी ती गुरुआमा कक्षामा आउन छोडिन् । केही समयपछि योगीहरूको ‘ग्रुप वीच्याट’ मा उनको म्यासेज देखियो । ‘अबदेखि म तपाईंहरूलाई कक्षा दिन आउँदिन, त्यसैले यस ग्रुपबाट आफूलाई रिमुभ (हटाएँ) गरें ।’
सन् २०१७ को जुन २१ तारिख, पेकिङ विश्वविद्यालयसँग मिलेर चीनस्थित भारतीय दूतावासले योग शिविरको भव्य कार्यक्रम गर्‍यो । पहिलो पटक चिनियाँहरू यति धेरै संख्यामा योग गरिरहेको देख्न पाइयो । उनीहरूले अलि अलि प्राचीन भारतीय योगबारे जानकारी पाए होलान् । तर अधिकांशले निःशुल्क बाँडिएको म्याट हत्याउनेमै ध्यान दिइरहेको प्रस्टिन्थ्यो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रस्तावमा, नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समर्थनमा संयुक्त राष्ट्रसंघले जुन २१ तारिखलाई विश्व योग दिवसको रूपमा निश्चित भएको थियो । चीनस्थित भारतीय संघसंस्थाहरू अझै पनि निकै उत्साहका साथ योगका गतिविधि गरिरहेका हुन्छन् ।
योगकला कताकति फेसन बन्दै छ । बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा भाइरल भएका केही तस्बिरहरू देख्दा अध्यात्मभन्दा फेसन बढी प्रतीत हुन्छ । योग वा अन्य कुनै बहानामा शारीरिक व्यायाम हुनु त राम्रै हो । त्यसो त चिनियाँहरूले मौलिक ‘थाइची’ लाई नै आध्यात्मिक र योगकै उपमा दिन्छन् । चिनियाँहरूले योग गर्दा मानसिकभन्दा शारीरिक लचकतालाई धेरै ध्यान दिने झल्किन्छ । सन् २०१५ मा चीनको भ्रमण गर्न आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनलाई योगमय बनाइदिए । अहिले चीनमा योग सिकेकाहरू वा योगका गतिविधिमा संलग्नहरूको एकचोटि पुग्नैपर्ने गन्तव्यको रूपमा भारत हुन थालेको छ ।
अहिले चिनियाँ थाइची र भारतीय योगलाई एकीकृत गर्न खोजिँदै छ । शाकाहार र योग अध्यात्मको पाटोमा पनि उनीहरू रुचि राख्दै छन् । धेरै भारतीयहरू चीनमा योग प्रशिक्षकका रूपमा रोजगार छन् । सन् २०१८ मा युननान जातीय विश्वविद्यालयमा चाइना–इन्डिया थाइची कलेज स्थापना गरिएपछि योग र थाइची अभ्यास फराकिलो हुँदै गएको छ ।
सन् २०१५ को मध्यमेतिर बेइजिङको टेम्पल अफ हेभनमा थाइची योग कक्षा सञ्चालन हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सहभागी भए । कुल ४०० भन्दा बढी अभ्यासीका साथ मोदीले चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङका अघिल्तिर योगकला देखाए । धेरै मानिसले जीवनमा पहिलो पटक यस्तो दृश्य देखे ।
प्रकाशित : असार ७, २०७६ १०:५०
असार ७, २०७६ दीपक भेटवाल
तनावले तपाईंको सम्पर्ण जीवनलाई खान थाल्छ । मानिसहरू यति धेरै तनावग्रस्त कहिल्यै थिएनन् । यतिबेला संसारभरका मानिसहरूको क्याराभान तनावको चुचुरोतिर लम्किरहेको जस्तो भान हुन्छ । तनावकै कारण आज संसारभर एक अर्बभन्दा बढी मानिस उच्च रक्तचापबाट पीडित छन् । चालीस करोडभन्दा बढी मानिस मधुमेहपीडित छन् । थाइराइड, युरिक एसिड, मुटुरोग, पाचन प्रणालीसम्बन्धी कम्तीमा एउटा रोगले पीडित नभएको घर फेला पार्नै मुस्किल छ ।
योग विज्ञानले यी सबै रोगको मूल कारण तनावलाई मान्छ । योग अभ्यासलाई तनाव व्यवस्थापनको सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक मार्ग मानिएको पनि छ । मानिसको खप्परभित्र दायाँ र बायाँ गरी दुई मस्तिष्क हुन्छन् । यी दुवैको काम फरक–फरक हुन्छ तर दुवैको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । बायाँ मस्तिष्कले, तर्क, गणित, विचार–विश्लेषण आदिको काम गर्छ । दायाँ मस्तिष्कले प्रेम, भावाना, करुणा आदिको काम गर्छ । यी दुवै मस्तिष्कले सन्तुलित ढंगले काम गरिरहँदा मात्र हाम्रो जीवनको सन्तुलन रहन्छ । हामी बाँचेको समय बेइमान छ । यसले हरपल देब्रे मस्तिष्कलाई अत्यधिक सक्रिय र दाहिने मस्तिष्कलाई अत्यधिक निष्क्रिय बनाइराख्छ । यी दुईमध्ये एउटा निकै बढी र अर्को कम सक्रिय हुन थालेपछि मस्तिष्कको सन्तुलन बिग्रन थाल्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीको दैलो उघार्नेबित्तिकै मानव समाज सूचना प्रविधिको घनघोर जंगलभित्र प्रवेश गर्न थाल्यो । प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालमा मानिसको पहुँच यति सस्तो हुन थाल्यो जसले मानिसलाई सूचनाको पहुँच निकै सहज, द्रुत बनाइदियो । हजारौं कोस पर अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमले सीएनएनका पत्रकारलाई झपारेको खबर पाँच मिनेटभित्र तपाईंको मोबाइलको पर्दामा ध्वनिसहित आइपुग्छ । इथियोपियामा भएको जाहाज दुर्घटनाको ब्रेकिक न्युजको भिडियो एक निमेषमा भाइरल भएर मानिसको हातहातै पुग्न थाल्छ । साउदी काम गर्न गएको नेपाली कामदारको मृत्युदण्ड, नरेन्द्र मोदीले गरेको चुनावी गुफाको तपस्या, निर्मला हत्याकाण्ड, काठमाडौंको सडकमा मान्छेको सिकार गर्दै कुद्ने टिपरको आतंक, केपी ओलीलाई खिस्याउन बनाएको कागजको पानीजहाज सबै सूचना तत्काल तपाईंको आँखाअगाडि चित्र मात्र होइन चलचित्रका रूपमा आइपुग्छन् ।
तपाईं अत्यधिक समय सूचनाको जंगलमा हराउनुहुन्छ भने तपाईंको बायाँ मस्तिष्क निरन्तर सक्रिय भइरहन्छ । किनकि प्रत्येक सूचनामा तपाईंको बायाँ मस्तिष्कले तर्क, विचार, विश्लेषण गर्न थाल्छ । यसले बायाँ मस्तिष्कलाई अत्यधिक सक्रिय बनाइराख्छ । हामी अधिकांश सयम बायाँ मस्तिष्क सक्रिय बनाउने धन्दामा आफूलाई घोटिरहेका हुन्छौं । मस्तिष्कको बायाँ भाग मात्र अत्यधिक सक्रिय भइरहनु भनेको तनावको कुण्डमा डुबिरहनु हो भन्ने बिर्सन्छौं । तनावको उत्पादनको गाँठी कुरा यहींबाट सुरु हुन्छ । हामीले दिनभरि ग्रहण गर्ने अधिकांश सूचना, समाचार नकारात्मक हुने गर्छन् । मस्तिष्कको पर्दामा प्रत्येक सेकेन्ड ठोक्किरहने बाईसथरीका नकारात्मक सूचनाले के फरक पार्छ ? तपाईं एक छिन सोच्नुस् त तपाईंको छिमेकमा बच्चा जन्मेको खबर सुन्दा वा सोही घरमा कोही मान्छे मरेको खबर सुन्दा तपाईंको मनमा उत्पन्न हुने भाव कति फरक हुन्छ ? तपाईंको मनको फरक भाव तपाईंको शरीरभित्र रहेका फरक हर्मोनहरूले पैदा गर्छन् । बच्चा जन्मेको खबर सुन्दा तपाईंको शरीरमा एकखाले हर्मोन उत्पन्न हुन्छ भने मान्छे मरेको खबर सुन्दा फरक । हरेकचोटि मस्तिष्कमा नकारात्मक सूचना ठोक्किँदा शरीरले नकारात्मक हर्मोन उत्पादन गर्छ, जसले बिस्तारै तपाईंकै स्वास्थ्यलाई खान थाल्छ ।
त्यति मात्र होइन, कुरा अर्को पनि छ ।
मानिसको आम मनोविज्ञानले अरूको कुभलो नचाहे पनि मभन्दा अरू राम्रो नहोस् भन्ने जब्बर चेतनाले भने थिचेर राखेको हुन्छ । मभन्दा राम्रो नहोस्, मभन्दा धनी नहोस्, मभन्दा असल नहोस् भन्ने मानिसको आम मनोवृत्ति हो । यो मनोवृत्तिले मानिसको चेतना हरेक पल नजानिदो किसिमले प्रतिस्पर्धाको घोडेदौडमा कुदिरहेको हुन्छ । यो प्रतिस्पर्धा एउटै उमेर समूह, विचार समूह, पेसा समूह वा एउटै समुदायका मानिसबीच झन् बढी हुन्छ । यो व्यक्तिवादी प्रतिस्पर्धा तपाईंको छिमेकी, नातेदार तथा साथीभाइसँग तपाईंभन्दा बढी हुन सक्छ । चरम व्यक्तिवादी प्रतिस्पर्धा तनावको ठूलो खानी हो । आजको युग फुसबुके युग पनि हो । मानिसहरू फेसबुक, ट्विटरमार्फत देश, समाज, राजनीति, छिमेकी, साथीभाइ, इष्टमित्र एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । यसले मान्छे मान्छेबीचको प्रतिस्पर्धालाई झन् सूक्ष्म र घनीभूत बनाइदिएको छ ।
प्रतिस्पर्धा मानव समाजमा भर्खरै जन्मिएको नयाँ चीज होइन, फेसबुके युगमा यो चरम व्यक्तिवादी, सूक्ष्म र घनीभूत हुँदै गएको मात्रै हो । सामाजिक सञ्जालमा तपाईंको छिमेकीले तपाईंको भन्दा ठूलो घर बनाएर वा तला थप्दै मुसुक्क हाँसेको फोटो पोस्ट गर्नुको अर्थ तपाईं बुझ्नुहुन्छ ? एक छिन अनुमान गर्नुस् त π त्यसको सीधा र एउटै अर्थ हुन्छ, मैले त बनाएँ तैँलेकहिले बनाउँछस् ?
छिनछिनमा मस्तिष्कमा ठोक्किरहने नकारात्मक सूचना, चरम व्यक्तिवादी प्रतिस्पर्धा, जीवन र सम्बन्धहरूलाई तर्क र गणितमा तौलने तुलोको निर्माणमा हामी जीवनको अधिकांश समय खर्चिरहेका हुन्छौं । यसको सीधा अर्थ हामी प्रत्येक क्षण हाम्रो जीवनमा तनावलाई आमन्त्रण गरिरहेका हुन्छौं । किनकि यी अवस्थामा तपाईंको देब्रे मस्तिष्क अत्यधिक चलायमान भइरहेको हुन्छ । चरम समाजिक बेथिति, देशको जर्जर राजनीति, विलासी र भोगवादी आदर्श, मानिसबीचको यान्त्रिक सम्बन्धले यसमा दनदनी बलिरहेको आगोमा घिउको जस्तै काम गरिरहेको हुन्छ । यसरी हामी प्रत्येक क्षण तनावको तावामा सेकिँदै गइरहेका छौ ।
अनि दायाँ मस्तिष्क नि ?
निःस्वार्थ भावले कसैको सेवा गरेको बेला, घरका नानीहरूसँग बालसुलभ बातचितमा भुलेको बेला, आफूलाई मन पर्ने सिनेमा हेरेको वा साहित्य पढ्दै गरेको बेला, प्रेमिकासँग प्रेमिल भावमा चुर्लुम्म डुबेको बेला, वृद्ध बाआमाको समीपमा बसेर बाल्यकालका आफ्ना चाखलाख्दा किस्सा सुनिरहेको बेला तपाईंको दायाँ मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको दौडमा अभ्यस्त भइसकेको तपाईंको जीवनमा यी कुराका लागि समय नै कहाँ पुग्छ र ? समय यतातिर दिन थाल्नुभयो भने प्रतिस्पर्धाको घोडा छुटिसक्छ !
अब अनुमान गर्नुस्– दिनभरिी कति समय तपार्इंको बायाँ मस्तिष्क बढी सक्रिय हुन्छ ? र, कति समय दायाँ मस्तिष्क ? दुई मस्तिष्क सन्तुलनको तराजुको आकृति कस्तो बन्छ ?
नारायणगोपालको एउटा गीत छ– ‘यो हिसाब भुलेर मैले बेहिसाब मन पराएँ ।’ यो एउटा भावानात्मक अभिव्यक्ति हो । त्यसैले यो दायाँ मस्तिष्कको अभिव्यक्ति हो । के तपाईं कसैलाई बेहिसाब मन पराउन सक्नुहुन्छ ? मुस्किल छ । किनकि तपाईंको मस्तिष्क भावनामा होइन तर्क र गणितमा अभ्यस्त भइसकेको छ । तपाईं एउटा मस्तिष्कले मात्र
चल्न थाल्नुभएको छ । तपाईंको जीवन एकांकी भइसकेको छ !
योग अभ्यासले तपाईंको जीवनमा गुम्दै जान थालेको सन्तुलन फिर्ता ल्याउनु मद्दत गर्दछ ।
योग दर्शनले मानव शरीरमा ७२ हजारभन्दा बढी नाडीको परिकल्पना गरेको छ । यीमध्ये दुई मुख्य नाडी ईडा र पिंगला हुन् । हठयोग दर्शनअनुसार यी दुई मुख्य नाडीको सन्तुलन गर्नु नै योगको उद्देश्य हो । एउटा नाडीको सम्बन्ध दाहिने मस्तिष्कसँग हुन्छ, अर्को मस्तिष्कको देब्रेसँग । ईडा र पिंगला नाडीको सन्तुलन गर्नु भनेको दुई मस्तिष्कको सन्तुलन गर्नु भनेको हो । यी दुई मस्तिष्कको सन्तुलन गर्नु नै तनावरहित, स्वस्थ्य, सिर्जनशील, आत्मविश्वासी हुनु हो ।
योगका धेरै मार्गहरू छन् । अष्टांग योग, कुण्डलिनी योग, कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग र हठयोग । नेपाली समाजमा योग र पतञ्जली पर्यायवाची शब्दका रूपमा स्थापित भएका छन् । भारतीय बाबा रामदेवले
आफ्नो कर्पोरेट कम्पनी नै ऋषि पतञ्जलीको नाममा स्थापित गरेर हजारौंको संख्यामा चौरमा योग सिकाउँदै हिँडेपछि योग र पतञ्जली पर्यायवाचीजस्ता बन्न पुगे । ऋषि पतञ्जली अष्टांग योगका सूत्राधार हुन् । तर, आज आमरूपमा गरिने योग आसन पतञ्जलीको देन होइन । वाल्मीकि कलेजका योग दर्शनका प्राध्यापक महेश पराजुलीका अनुसार योग आसनमा पतञ्जलीको खासै योगदान छैन । आसनबारे पतञ्जलीले खासै केही भनेका छैनन्, विधि र लाभबारे पनि खास व्याख्या गरेका छैनन् ।
आज संसारभरका मान्छेहरूले गर्ने योगआसन हठयोग वा यसको परिस्कृत रूप हो । अरू योगका मार्गहरूमा आसनको खासै महत्त्व हुँदैन । योग अभ्यासमा आसनहरूको व्यापक प्रयोग र महत्त्व हठयोगले स्थापित गरेको हो । यसलाई विकास र परिष्कृत योगी गोरखनाथले गरेका हुन् । उसो त कतिपयले मात्र आसनलाई नै सम्पूर्ण योगका बुझ्ने गरेका छन् । आसनलाई मात्र योग ठान्नु रूखको एउटा पातलाई सिंगो रूख ठान्नुसरह हो । अझ सयौंको संख्यामा चौरमा भेला भएर उफ्रिनुलाई पनि योगको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । अबेरसम्म हाई काढेर ओछ्यानमा सुत्नुभन्दा, बिहान उठेर शारीरिक व्यायाम गर्नु आफैंमा राम्रो कुरा हो तर त्यो योग होइन ।
के उसो भए हात तन्काउने, खुट्टा बटार्ने, उफ्रिने, कम्मर मर्काउने विशुद्ध शारीरिक क्रियाकलाप योग होइन त ?
होइन । बिल्कुल होइन ।
उसो भए योग के हो त ?
योग एकाग्रता हो । अनुभूति हो, रूपान्तरण हो । योगको उद्देश्य जोड्नु हो । तपाईंले गरेको आसनको अभ्यास योग अभ्यास हुनका लागि तपार्इंको शरीर, मन र श्वासप्रश्वाससँगै जोडिएको हुनुपर्छ । तपाईंका शरीरको हरेक चाल र श्वासको लयको अनुभूति तपाईंको मनको गहिराइसम्म पुग्नुपर्छ । तपाईंको शरीर र मन दुवै वर्तमानमा स्थिर हुनुपर्छ । तपाईंको सम्पूर्ण ध्यान आत्मकेन्द्रित भएको हुनुपर्छ । तपाईंले गरेको हरेक अभ्यासमा तपाईंको आत्मस्वीकृति, आत्मअनुभव जोड्न पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । विधिपूर्वक गरेको योग अभ्यासले बिस्तारै तपाईंभित्र आन्तरिक जागरणको मार्ग खोतल्न थाल्छ । आत्मजागरणको क्रमिक विकासले तपाईंलाई भावनात्मक रूपले रूपान्तरण गर्छ । यी सबै प्रक्रियाहरूमा तपार्इंको दाहिने मस्तिष्क सक्रिय हुँदै जान थाल्छ । दुवै मस्तिष्कको सन्तुलन व्यवस्थित हुँदै जान थाल्छ । र, तपाईंको तनाव कम हुन थाल्छ । अनि बल्ल तपाईंले स्थायी रूपमा तनावबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य हासिल गर्न सक्नुहुन्छ । यी सबै चीज हासिल गर्नका लागि तपाईंले योगअभ्यास गर्ने स्थल, समय, योग अभ्यासप्रति तपाईंको विश्वास सबैको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । तपाईंको योग प्रशिक्षक योग विज्ञानको ज्ञान र अनुभवले खारिएको हुनु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सबै मानिसहरूले एकै–एकैखाले योग आसन वा प्रणायमहरूको अभ्यास गर्नु पनि घातक हुन्छ । आसन र प्रणायमका विभिन्न समूहहरू छन् । फरक मानिसका लागि फरक समूहका आसन र प्रणायमहरू लभदायक हुन्छन् । स्वास्थ्य समस्या, उमेर, स्वभाव, मनोविज्ञानअनुसार फरक–फरक किसिमको समूहका योग अभ्यास गराउनुपर्छ । तपाईंको शरीरको आवश्यकता र अभ्यास बाझिएमा तपाईंलाई झन् गम्भीर समस्या आउन सक्छ । तसर्थ सबैखाले मानिसलाई एउटै समूहमा राखेर योग अभ्यास गराउनु हुँदैन । पेटसम्बन्धी रोग भएकाहरूका लागि एकखालको अभ्यास आवश्यक हुन्छ भने निद्रा नलाग्ने समस्या भएकाहरूका लागि अर्कै । मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएकाहरूका लागि एकखाले आसन र प्रणायमको अभ्यास गराइन्छ भने डिप्रेसन भएकाहरूका लागि अर्कै खालको । योग अभ्यास निकै ठूलो समूहमा गरिने अभ्यास नै होइन ।
अलि अघिसम्म मानिसहरू सामान्य व्यायाम मात्र गरेर स्वस्थ रहन सक्थे । साँझ–बिहान हिँड्ने, एरोबिकको अभ्यास गर्ने, जुम्बा नाच्ने, जिमखानामा पसिना निकाल्ने आदि शारीरिक व्यायाम काफी हुन्थ्यो । जमाना बदलियो । अब शारीरिक व्यायामले मात्र तपाईंको स्वास्थ्यलाई भरिपूर्ण टेवा नदिन सक्छ । अझ उच्चरक्तचाप, तनाव, अनिद्राबाट पीडितहरूले शरीरका कोषहरू उत्तेजित गर्ने कुनै व्यायाम गर्नु भनेको काशी जानु कुतीको बाटो भनेजस्तै हो । उनीहरूले कोषको थकान मेटाउने, कोषमा ताजगी ल्याउने अभ्यास गर्नुपर्छ । जुन योग अभ्यास नै हो ।
तपाईंको जीवनका यावत् समस्याहरू तपाईंको गर्धनमा अडिएको खप्परभित्र छन् । तपार्इंले गरेका शारीरिक व्यायामले मूलतः टाउको तलको भागमा मात्र प्रभाव पार्छ । योग शरीरको मात्र होइन, शरीर र मन दुवैको अभ्यास हो । योग मात्र त्यस्तो अभ्यास हो जसले बाहिरी शरीरको टाउकोदेखि पैतालासम्म प्रभाव पार्ने मात्र होइन शरीरभित्र रहेको, भित्री शरीरमा पनि उत्तिकै प्रभाव पार्दछ । योग विज्ञानले हाम्रो शरीरभित्र पाँचवटा शरीर हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छ ।
कुनै बेला हिन्दु धर्मसँग नजिकजस्तो देखिने योग अब कुनै धर्मको पेवा रहेन । योग अब अरब जगत्का इस्लाम समाजमा मात्र होइन, धर्म नै नमान्ने चिनियाँ समाजमा समेत उत्तिकै फैलिइसकेको छ । कलाकार, खेलाडी, कर्पोरेट मालिक, सीईओ, आदि पेसाकर्मीहरूले क्षमतालाई तिखार्नका लागि पनि योगअभ्यासको सहायता लिन थालेका छन् ।
योग दर्शन पूर्वीय समाजले संसारलाई दिएको सबभन्दा सुन्दर उपहार हो । अबका सयौं वर्ष मानिसहरूको जीवन योगदर्शनको मियोवरिपरि घुम्ने अनुमान छ । मानिस चाहेर वा नचाहेर, बुझेर वा नबुझेर आफ्नो जीवनलाई योगसँग जोड्न बाध्य हुनेछन् । अहिले नै मानिसले अब्बल विद्यार्थी बन्न योगाभ्यास गर्न थालेका छन् । प्रतिस्पर्धामा सबैलाई उछिन्न योग गर्न थालेका छन् । स्वस्थ्य रहन, आत्मविश्वासी बन्न, सफल व्यवसायी बन्न, धन कमाउन, प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न, तनाव व्यवस्थापन गर्न, दैनिक जीवनका झमेलाहरूको व्यवस्थापन गर्न, सम्बन्धहरूलाई सन्तुलित गर्न योगले सहयोग गर्न सक्छ ।
twitter: @ deepakbhetwal